ဒတ်ခ်ျတောင်း၊ စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO •ဒတ်ခ်ျတောင်းမြို့ဝန်းကျင်အကြောင်း•ဒတ်ခ်ျတောင်းစတာလင်း.org
Dutchtown သည်မစ်ဆူရီပြည်နယ်စိန့်လူးဝစ္စ၏တောင်ဘက်ခြမ်းရှိရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒတ်ခ်ျတောင်းရပ်ကွက်သည်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနှင့်ပထဝီအနေအထားအရမြို့၏ ၇၉ ခုအနက်အကြီးဆုံးမြို့တစ်ခုဖြစ်သည်။ Dutchtown သည်မတူကွဲပြားသောလူ ဦး ရေ၊ သမိုင်းဝင်ဗိသုကာ၊ မြို့ပြပန်းခြံများနှင့်စျေးဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနေထိုင်ရာနေရာဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်“ Dutchtown” ဟုခေါ်သောအရာ၏နယ်နိမိတ်များသည်အတော်အတန်ခက်ခဲသောအရာများဖြစ်သည်။ စိန့်လူးဝစ်၏စီးတီး အချို့အလွန်တိကျတဲ့နယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ သို့သော်အနီးအနားရှိပတ်ဝန်းကျင်ရှိဆိုင်းဘုတ်များကသင်သည် Gravois Park၊ Pleasant Mount, သို့မဟုတ် Marine Villa တို့တွင်ရှိသည့်အခါ“ သင်သည်ဒတ်ခ်ျတောင်းတွင်ရှိသည်” ဟုပြောလိမ့်မည်။ ဒီမှာ နေခြည်ကျွန်ုပ်တို့သည် Dutchtown ကိုခြာရိုကီလမ်း (သို့) Chippewa လမ်းအကြားမြောက်ဘက်သို့သွားရန်၊ တောင်ဘက်တွင် Bates လမ်း၊ အရှေ့ဘက်တွင် Mississippi မြစ်နှင့်အနောက်ဘက် Missouri Pacific ရထားလမ်းတို့အကြားအားလုံးဖြစ်သည်။
Dutchtown ဟူသောအမည်ကိုစိန့်လူးဝစ္စစတိုင်ပုံစံ (Deutsch) ၏မှားယွင်းစွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ၁၉ ရာစုဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး၊ အရှေ့တောင်ဘက်စိန့်လူးဝစ်၏ကြီးမားသောနေရာကိုစုဆောင်း။ တည်ဆောက်ခဲ့သောဂျာမန်လူမျိုးများဖြစ်သည်။ Dutchtown အမည်ကိုမကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များကကျော်ကြားခဲ့သော်လည်းရှေးရှေးလူအများစုက၎င်းကို“ တောင်ဘက်ခြမ်း” ဟုခေါ်ကြသည်။
2020 ခုနှစ်, Dutchtown ပင်မလမ်းများ နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် မစ်ဆူရီပင်မလမ်းဆက်သွယ်မှု အတွက် စိန့်လူးဝစ် Main Streets ပဏာမခြေလှမ်း Downtown Dutchtown ၏စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သာယာဝပြောမှုကိုအားကောင်းလာစေရန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်စီးပွားရေးစင်္ကြံများ
Dutchtown မြို့လယ်: Meramec လမ်း
Grand Boulevard ၏အရှေ့ဘက်ရှိ Meramec လမ်းကို Downtown Dutchtown ဟုရည်ညွှန်းသည်။ အနီးအနားရှိစီးပွားရေးအရချွတ်ယွင်းမှုတွင်ကဖေးများနှင့်အရက်ဆိုင်များ၊ ပြန်လည်ရောင်းချသည့်ဆိုင်များနှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများပါရှိသည်။
Meramec နှင့်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်တို့တွင်သင်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိအခိုင်မာဆုံးကျောက်ဆူးအချို့ကိုတွေ့နိုင်သည်။ Winkelmann သားမူးယစ်ဆေးဝါး 1913 ခုနှစ်ကတည်းကအနောက်တောင်ဘက်ထောင့်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။ မြို့ပြစားသောက်ဆိုင်ကဖေး အသိုင်းအဝိုင်းစုရုံးမှုများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အစားအစာ၊ သောက်သုံးရေနှင့်နေရာထိုင်ခင်းများကိုပေးသည်။ ပြီးတော့ Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုအားပေးမြှင့်တင်ရန်လုပ်ဆောင်သည်
သမိုင်းဝင် Feasting Fox အဆောက်အအုံသည် Meramec ၏အနောက်ဘက်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရှေ့ပိုင်းအဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ် Padua ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း၏စိန့်အန်သိုနီ, အဘယ်သူ၏မျှော်စင်အမွှာ steeples အားလုံးတောင်ဘက်ခြမ်းကနေမြင်နိုင်ပါသည်။
South Grand Boulevard တွင် Dutchtown အိမ်ဟုခေါ်သည့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကိုကူညီရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာပါရှိသည်။ ဗီယက်နမ်စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကုန်စုံဆိုင်များနှင့်ကော်ဖီဆိုင်များသည် Grand ၏လမ်းပိုင်းနှင့်အတူဖြစ်သည် Gurung စျေး နှင့်နီပေါလူဝင်မှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အစေခံသောအခြားဆိုင်များ၊ အသင်းတော်ငယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အခြားဆိုင်များနှင့်ရုံးများသည် Dutchtown ရှိ South Grand ၏ကျန်များကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေသောအသိုင်းအဝိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောစျေးဆိုင်များ၏ပုံစံအမျိုးမျိုးအပြင်ဒတ်ခ်ျတောင်းအိမ်ကိုဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီ။ ခေါ်ဝေါ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ - Merb ရဲ့သကြားလုံးသူတို့ရဲ့ Bionic ပန်းသီးနှင့်ချောကလက်ဖုံးလွှမ်းထားသောစတော်ဘယ်ရီကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ မျိုးဆက်သစ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည့် Feasting Fox စားသောက်ဆိုင်၊ နှင့်သင်တန်း၏ Ted Drewes Frozen Custard - ဟောင်းလွန်းသော်လည်းသိသိသာသာနည်းသောနေရာသည်စည်ကားနေသောစိန့်လူးဝစ္စတောင်တန်းများထက်ပိုတိုသောလိုင်းများနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူသောကားရပ်နားရန်နေရာများပါရှိသည်။ စိန့်မာရိရဲ့ကက်သလစ်အထက်တန်းကျောင်း နှင့်၎င်းတို့၏27က XNUMX camp ကျောင်းဝင်း Delor လမ်းမှာဂရန်း၏တောင်ဘက်အဆုံးကိုဆင်းကိုင်ထားပါ။
မကြာသေးမီက စိန့်လူးဝစ်လူသားများအတွက် Habitat ရှည်လျားသောလစ်လပ်နေသော ၅၀,၀၀၀ စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းသည့်တောင်ကို Grand နှင့် Chippewa လမ်းတွင်၎င်းတို့၏ဌာနချုပ်၊ ဂိုဒေါင်နှင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် Habitatအသစ်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာများကိုကမ်းလှမ်းသည့်ထွက်ပေါက်တစ်ခု။ မြောက်ဘက်တွင်, Garcia Properties ကိုမကြာသေးမီကဝယ်ယူခဲ့သည် Arcview အဆောက်အအုံ Grandview Gravois Park တွင်ဆယ်စုနှစ်များစွာနေရာလွတ်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်။
Gravois Park နှင့် Dutchtown တို့အကြားတရားဝင်နယ်နိမိတ်ဖြစ်သော Chippewa လမ်းသည်မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးထ နှင့် လူသာရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဒေါ်လာ ၁၂ သန်း Chippewa ပန်းခြံစီမံကိန်း Chippewa တွင်သို့မဟုတ်အနီးအနားရှိအဆောက်အအုံ ၁၅ လုံးကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ထိုဒေသရှိနေရာလွတ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်အိမ်ရာကိစ္စများကိုကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်။ မကြာသေးမီကချမှတ်ခဲ့သော Gravois-Jefferson သမိုင်းဝင်အိမ်နီးချင်းစီမံကိန်း တန်ဖိုးနည်းပါးသော Chippewa လမ်းကိုအထူးအာရုံစိုက်ကာအနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။
တောင်ပိုင်း Broadway / တောင်ဂျက်ဖာဆန်
ကျယ်ပြန့်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို South Broadway နှင့် Chippewa လမ်းတွင်ပေါင်းစည်းထားသော South Jefferson တစ်လျှောက်တွင်အခြေခံသည်။ Liberty ဟာ့ဒ်ဝဲ, ကော်ဖီ Sumpနှင့် Don's Meat Market အဆိုပါချွတ်တလျှောက်တွင်သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့ရှိပါသည်။ Concordia ထုတ်ဝေရေးအိမ် ရှိပါတယ်အဖြစ်နှစ်ပေါင်း 150 ကျော်များအတွက်inရိယာ၌ဖြစ်ခဲ့သည် စိန့်အဲလက်စီယပ်စ်ဆေးရုံ, ပြီးနောက် ဂျာမန်ယဉ်ကျေးမှုလူ့အဖွဲ့အစည်း ထို့အပြင်ဒေသ၏အစောပိုင်းအခြေချရန် harkens ။
ခြာရိုကီ Street ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှ စတင်၍ လူကြိုက်များသောစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်ခြာရိုကီသည်အထူးစတိုးဆိုင်ငယ်များအပြင်ဌာနဆိုင်များနှင့်ပြဇာတ်ရုံများစွာကိုလက်ခံခဲ့သည်။
ခြာရိုကီရှေးဟောင်း Rowဂျက်ဖာဆန်နှင့် Lemp Avenues အကြားဒေသတွင်းမဲနှိုက်မှုသည်ကြာရှည်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသောရှေးဟောင်းကုန်သည်များ၊ ကဖေးများ၊ အနုပညာစတူဒီယိုများနှင့်အခြားဆိုင်များနှင့်အတူခြာရိုကီလမ်း၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းကိုတန်းစီကာရှေးဟောင်းအမဲလိုက်ခြင်းမှမုဆိုးများအားလုံးကိုခေါ်ဆောင်လာကြသည်။
ဂျက်ဖာဆန်၏အနောက်ဘက်ခြာရိုကီလမ်းသည်မက္ကဆီကို - အမေရိကန်အသိုင်းအဝိုင်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ မက္ကဆီကန်ကုန်စုံဆိုင်များ၊ တာကရီယာ၊ အဝတ်အထည်စတိုးဆိုင်များ၊ အလှပြင်ဆိုင်များနှင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်များသည်ဂျက်ဖာဆန်၏အနောက်ဘက်တွင်ပေါ်လာသည်။ မကြာသေးမီကခြာရိုကီသည်စစ်မှန်။ စျေးသိပ်မကြီးသည့်မြို့နေလူနေမှုပုံစံကိုရှာဖွေနေသည့်အနုပညာရှင်များနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ သူတို့နှင့်အတူအနုပညာပြခန်းများ၊ ဖျော်ဖြေရေးနေရာများ၊ ပီဇာရီများ၊ ကော့တေးအရက်ဆိုင်များနှင့်ဘီယာစက်ရုံတို့ပါဝင်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုလုံးဘေးချင်းယှဉ်။ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ပြီးခြာရိုကီလမ်းသည်ယခုအခါလူကြိုက်များသောထမင်းစားခန်းနှင့်ညဥ့်နက်နေရာဖြစ်သည်။
ရပ်ကွက်၏အလယ်ဗဟိုတွင်, Compton ရိပ်သာလမ်း straddling Marquette ပန်းခြံ။ Marquette သည်တောင်ဘက်အခြမ်းတွင်အကြီးဆုံးလွတ်လပ်သောအများပိုင်ရေကန်ဖြစ်သည်။ အသစ်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော Marquette Park Field House သည်ရပ်ကွက်အတွင်းကိုလျစ်လျူရှုပြီးအစည်းအဝေးများ၊ rece ည့်ခံပွဲများနှင့်အခြားအရာများအတွက်နေရာများစွာပေးသည်။ Marquette အပန်းဖြေစင်တာတွင်ဘတ်စကက်ဘောအားကစားရုံတစ်ခုပါဝင်ပြီးရပ်ကွက်ရှိလူငယ်များအတွက်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်သည်။ အားကစားကွင်းများ၊ တင်းနစ်ကွင်းများနှင့် Marquette Park ၏သာယာအဆင်ပြေမှုများကိုကစားနိုင်သည့်ကစားကွင်း။
အဆိုပါ Marquette ပန်းခြံ၏မဟာမိတ်များ ပန်းခြံအားပြန်လည်အသက်သွင်းရန်နှင့်အဆောက်အအုံများတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ရည်ရွယ်သည့်မကြာသေးမီကဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ 2019 ၏နွေရာသီအတွက်တစ် ဦး ကရန်ပုံငွေရှာ $ 7,000 ကျော်ထမြောက်တော်မူ ရေကူးကန်တွင်ပရိဘောဂနှင့်အခြားသက်သောင့်သက်သာရှိစေရန်။ အခြားအားထုတ်မှုများတွင်ဘောလုံးစက်ရုံများအဆင့်မြှင့်တင်မှုများလည်းပါဝင်သည်။
Marquette ပန်းခြံအကြောင်းပိုမိုသောအချက်အလက်များကိုရှာပါ, လာမည့်ဖြစ်ရပ်များအပါအဝင်, ဒီမှာ DutchtownSTL.org အပေါ်။
သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာ မင်နီဆိုတာနှင့် Gasconade ရှိ Marquette Park ၏အရှေ့တောင်ထောင့်တွင်ရပ်သည်။ အဆောက်အ ဦး တွင်ကွန်ပျူတာဓာတ်ခွဲခန်း၊ အနုပညာစတူဒီယိုတစ်ခု၊ သရုပ်ပြမီးဖိုချောင်တစ်ခု၊ စာကြည့်တိုက်တစ်ခု၊ အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကအစည်းအဝေးများနှင့်အဖြစ်အပျက်များစွာကိုစီစဉ်ခြင်းအပြင်သောမတ်စ်ဒွန်းသည်ကွန်ပြူတာနှင့်အနုပညာဓာတ်ခွဲခန်းတွင်နာရီများ၊ HiSET (GED) သင်တန်းများ၊ မိဘအုပ်ထိန်းမှုပညာရေး၊ ဘဏ္financialာရေးအကြံပေးခြင်း၊
ကြောင့်မြောက်ဘက် Marquette ၏ဖြစ်ပါတယ် Gravois ပန်းခြံအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ၎င်း၏အမည်ကိုယူရာမှ။ Gravois ပန်းခြံကို ၁၈၁၂ တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ပတ်ဝန်းကျင်သည်ကြီးထွားလာသည်။ ပန်းခြံသည်၎င်း၏အလယ်ဗဟိုတွင်လှပသောအခန်းတစ်ခန်းပါရှိပြီးမကြာသေးမီကကစားကွင်းအသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
Laclede ပန်းခြံနှင့် Minnie Wood ကသတိရအောက်မေ့ရင်ပြင်
အရှေ့ဘက်တွင်, တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားနီးပါးကပ်လျက်ဖြစ်ကြသည် Laclede ပန်းခြံ နှင့် Minnie Wood သတိရအောက်မေ့ရင်ပြင်။ South Broadway နှင့် Meramec ရှိ Minnie Wood Square ကိုထိုထောင့်ရှိအဝါရောင်တောက်ပသောတဲဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ ပန်းခြံတွင်ဘက်စုံသုံးအားကစားရုံများနှင့်ကစားကွင်းများစွာပါရှိသည်။ Gasconade နှင့် Iowa ရှိ Laclede Park တွင်အိမ်နီးချင်း Minnie Wood ၏သာယာအဆင်ပြေမှုများမရှိသော်လည်း ၁၈၁၂ တွင်ပြန်ထူထောင်ခြင်း၏ထူးခြားချက်ရှိသည်။ Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း သူတို့ရဲ့တည်ထောင်ခဲ့သည် အိတ်ဆောင်ပန်းခြံ၏သူငယ်ချင်းများ အသိုင်းအဝိုင်း input ကိုမှတဆင့်ပန်းခြံများနုပျိုရန်စီမံကိန်း
Mount Pleasant ရပ်ကွက်သည်သူတို့၏အမည်ကိုယူသည် တောင်ပေါ်မှာသာယာသောပန်းခြံ မီချီဂန်နှင့်ဒါကိုတာတွင်ဖြစ်သည်။ ဒီအိတ်ကပ်ပန်းခြံမှာဟော်ကီကွင်းနှင့်ကစားကွင်းတစ်ခုပါရှိပါတယ်။
အမ်ဘာ့ဂ်ပန်းခြံ Dutchtown ၏အနောက်ဘက်အပိုင်းဖြစ်သော Gustine၊ Keokuk နှင့် Dunnica Avenues တို့တွင်တည်ရှိသည်။ ဘေ့စ်ဘောစိန်၊ ကစားကွင်းအသစ်နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသောလောင်းကစားရုံသည်အမ်ဘာ့ဂ်ဥယျာဉ်၏သာယာအဆင်ပြေမှုများဖြစ်သည်။
Dutchtown ၏လူ ဦး ရေအချိုးအစား
Dutchtown မြို့ပတ် ၀ န်းကျင်လေးခုတွင်လူ ဦး ရေ ၃၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံသည်စိန့်လူးဝစ္စလူ ဦး ရေထူထပ်သောဒေသများဖြစ်သည်။
Dutchtown ဟာတော်တော်လေးကွဲပြားခြားနားတယ်။ အဓိကအားဖြင့်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်များရှိသော်လည်းလက်တင်လူမျိုးများသည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်။ ကြာမြင့်စွာကတည်းကတည်ရှိခဲ့သောဗီယက်နမ်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့မှအခြားပြောင်းရွှေ့အခြေချသူများစွာသည်လူ ဦး ရေ၏များပြားလှသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ Dutchtown ၏လူ ဦး ရေသည်အလွန်ငယ်ရွယ်ပြီး၊ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်တွင်နေထိုင်သူ၏သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ရှိသည်။
ယင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ Dutchtown ၏လူ ဦး ရေအချိုးအစားယခုနှင့်နှစ်ပေါင်းမှတဆင့်။
ပို့သော Dutchtown ownရိယာ၏ဗိသုကာသည် St. Louis inရိယာတွင်တွေ့ရမည့်စတိုင်တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ပြည်တွင်းစစ်မတိုင်မီ၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောအဆောက်အအုံများနှင့်အကြားရှိအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ရှေးအကျဆုံးဗိသုကာကိုယေဘုယျအားဖြင့်မြောက်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်ပိုင်းပတ် ၀ န်းကျင်အတွင်း၌တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်ခြွင်းချက်များစွာရှိသည်။
အိမ်များသည်အများအားဖြင့်အုတ်များဖြစ်ပြီးမစ္စစ္စပီမြစ်ကမ်းပါးပေါ်ရှိသေးငယ်သောသေနတ်သမားအလုပ်သမားများ၏အိမ်များနှင့်ကျိုးနွံသောဘန်ဂလိုများအထိထူးခြားသောလေးထပ်ရင်ပြင်များနှင့်အိမ်များအထိအမျိုးမျိုးရှိသည်။ တစ်အိမ်တည်းနေအိမ်များအပြင်၊ duplex နှင့်မိသားစုလေးအိမ်အဆောက်အအုံများမှာအလွန်အမင်းတွေ့ကြုံနေရသည်။ ပိုကြီးတဲ့တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံတွေကိုအနီးအနားကတဆင့်ရှာတွေ့နိုင်တယ်။
Dutchtown areaရိယာသည်သမိုင်းဝင်နေရာများ၏အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရှိခရိုင်များစွာ၏နေရာဖြစ်သည်။ The Gravois- ဂျက်ဖာဆန်လမ်းဘေးသမိုင်းဝင်ခရိုင် Gravois ပန်းခြံနှင့် Dutchtown မြောက်ဘက်အခြမ်းပါ ၀ င်သည်။ The စိန့်စီစီလီယာသမိုင်းဆိုင်ရာခရိုင်အထူးသဖြင့်ခရိုင်တစ်လျှောက်ရှိဖြူ glaas“ မီးဖိုချောင်သုံးအုတ်ခဲများ” ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်ထင်ရှားသည် Dutchtown South မင်္ဂလာပါstoric ခရိုင် Dutchtown ၏တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ The အဏ္ဏဝါဗီလာအိမ်နီးချင်းသမိုင်းဝင်ခရိုင် အဏ္ဏဝါဗီလာ၏အဘို့ကိုဖုံးလွှမ်း။
Dutchtown ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအဆောက်အ ဦး များစွာကိုလည်း National Register တွင်လည်းဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါပျံ့နှံ့နေတဲ့ အမျိုးသားသကြားလုံးကုမ္ပဏီစက်ရုံ (မကြာသေးမီကမှပြန်လည်နှင့်လက်ရှိနေအိမ် ဦး-တစီးကို) သည်အတိုင်း, စာရင်းဖြစ်ပါတယ် Stork အင်း ဗာဂျီးနီးယားနှင့်အိုင်ဒါဟိုမှာ။ ဒီဇိုင်းအတော်များများကျောင်းတွေ ဝီလျံခ Ittner Cleveland အထက်တန်းကျောင်းအပါအဝင်မှတ်ပုံတင်တွင်ပါ ၀ င်သည်။ စာရင်းဝင်သမိုင်းဝင်အိမ်များတွင်ပါဝင်သည် Miltenberger အိမ် Osceola နှင့်အပေါ် Chatillon De Menil အိမ် ရှေးဟောင်း Row ရဲ့အဆုံးအနီး။
ရပ်ကွက်အတွင်းရှိအခြားဗိသုကာဆိုင်ရာထူးခြားချက်များမှာကက်သလစ်ချာ့ချ်များပါဝင်သည် Padua ၏စိန့်အန်တိုနီယို နှင့် စိန့်စီစီလီယာ, ရှေးဟောင်း Row ၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိ Lemp ဘီယာစက်ရုံနှင့်ခြာရိုကီလမ်းရှိစင်ဒရဲလားအဆောက်အအုံ။
Dutchtown tရိယာသည်စိန့်လူးဝစ် aldermanic ရပ်ကွက်သုံးခုတွင်အဓိကကျသည်။ အဆိုပါအနောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းဝေမျှသည် ၂၅ ရပ်ကွက်ကကိုယ်စားပြုသည် Ald ။ ရှိန် Cohn။ အဆိုပါ ၂၅ ရပ်ကွက် ရပ်ကွက်အတွင်း၏မြောက်ဘက်အဘို့ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်ကိုယ်စားပြုသည် Ald ။ Cara Spencer။ အဆိုပါပုံမှန်မဟုတ်သောပုံ ၂၅ ရပ်ကွက်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် Ald ။ Dan Guenther, မြောက်ဘက်, အရှေ့, နှင့်တောင်ဘက်အချို့မြေပြင်ဖုံးလွှမ်း။ Ald ။ စာရာမာတင်ရဲ့ 11th ရပ်ကွက် နှင့် Ald ။ ဗက် Murphy ရဲ့ 13 ရပ်ကွက် နှစ် ဦး စလုံးသည်အနီးအနားရှိတောင်ဘက်အစွန်အဖျားငယ်များကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။
Missouri အောက်လွှတ်တော်သုံးခရိုင်သည် Dutchtown ကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ကိုယ်စားပြုအဆိုပါ 78th ခရိုင် ကိုယ်စားလှယ်။ Rasheen Aldridge, ရပ်ကွက်အတွင်း၏အရှေ့မြောက်ပိုင်းသောအဘို့ကိုဖုံးလွှမ်း။ ကိုယ်စားပြု 80 ခရိုင် rep ။ ပတေရုသ Meredith, Dutchtown ၏အနောက်မြောက်ထောင့်ပါဝင်သည်။ ရပ်ကွက်၏တောင်ဘက်ပိုင်းသည်လက်ရှိကိုယ်စားပြုသော ၈၁ ခုမြောက်ခရိုင်အတွင်းသို့ကျရောက်သည် ကိုယ်စားလှယ်စတိဗ် Butz။ ရပ်ကွက်အားလုံးသည်ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်ခရိုင် ၅ တွင်တည်ရှိသည် အထက်လွှတ်တော်အမတ်စတီဗင်ရောဘတ်.
ဖက်ဒရယ်အဆင့်တွင်, Dutchtown အားဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည် အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ် Cori Bush, အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ရွိုင်းဘလန့်နှင့် အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Josh Hawley.
ဆက်သွယ်ရန်လမ်းညွှန်တွင်ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာများအပါအ ၀ င်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသောအရာရှိများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက Dutchtown နှင့် South Side တို့သည်အရာရှိများကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြသည်.
၏မစ်ရှင် ဒိန်းမတ် နယ်သာလန် (ကျယ်ပြန့်စွာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်) အတွက် for ၀ ံဂေလိတရားကို and ၀ ံဂေလိတရားဟောပြောရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်သူများ၊ အိမ်နီးချင်းများ၊ visitors ည့်သည်များ၊
DutchtownSTL သည်နောက်ဆုံးပေါ်နေ့စွဲကိုထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည် ဖြစ်ရပ်များပြက္ခဒိန်, အပြုသဘောပေးပါ ရပ်ကွက်သတင်းပုံပြင်များနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုမျှဝေခြင်းနှင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းအားကောင်းလာစေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်၏သမိုင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ဒတ်ခ်ျတောင်းareaရိယာအတွက်တောက်ပသောအနာဂတ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဆန္ဒရှိသူမည်သူမဆိုအတွက်နေရာပေးခြင်း။
ငါတို့ site နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အကြောင်းသတင်းကိုဖြန့်ဝေရန်သင်ကူညီခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ထိုအရာကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သူငယ်ချင်းများ Dutchtown တွင်ဘာတွေဖြစ်နေသည်ကိုသိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်များနှင့်စာမျက်နှာများရှိ share link များကိုနှိပ်ပါ။ သင်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးမျှဝေနိုင်သည် Facebook က, တွစ်တာနှင့် Instagram ကို.
ပံ့ပိုးမှုများနှင့်အကြံပြုချက်များကိုကြိုဆိုထက်ပိုပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးငါတို့လာလည်ပါ အဆက်အသွယ်စာမျက်နှာ သို့မဟုတ်အီးမေးလ် info@dutchtownstl.org မည်သည့်စိတ်ကူးများသို့မဟုတ်မေးခွန်းများနှင့်အတူ။
ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့်အရာအချို့မှာ - အပြုသဘောဆောင်သောရပ်ကွက်အတွင်းသတင်းများ၊ အဖြစ်အပျက်ကြေငြာချက်များ၊ လူထုအရင်းအမြစ်များ၊ Dutchtown နေရာများလမ်းညွှန်သမိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်မှန်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဆောင်းပါးများနှင့်မှတ်တမ်းများ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများ၊ ဓာတ်ပုံပညာသို့မဟုတ်အခြားအရာများ။ ဆက်သွယ်ရန် သင်မျှဝေချင်လျှင်!
ကျွန်ုပ်တို့၏စာမူများကိုလိုက်နာခြင်း၊ ဝေမျှခြင်း၊ ဝေမျှခြင်းဖြင့်စကားလုံးကိုဖြန့်ဝေပါ Facebook က, တွစ်တာနှင့် Instagram ကို။ လူတွေကိုငါတို့အလုပ်ဝေမျှတာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။
DutchtownSTL အားဖြင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငွေကြေးထောက်ပံ့သည် Dutchtown ပင်မလမ်းများ နှင့် Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင်. Dutchtown Main Streets သို့လှူဒါန်းပါ ဆိုက်ကိုကူညီပံ့ပိုးရန်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Read ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများ.
ဤစာမျက်နှာရှိဓာတ်ပုံများသည်ယဉ်ကျေးစွာဖြင့်ဖြစ်သည် ရှင်ပေါလု Sableman.
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် အောက်တိုဘာလ 19th, 2021 .
ဒိန်းမတ် Dutchtown အကြောင်း